Hira gasy makotrokotroka :: Adin’ny samy Ampahimanga ny lalao famaranana etsy Analakely • AoRaha
Hira gasy makotrokotroka Adin’ny samy Ampahimanga ny lalao famaranana etsy Analakely
Rehefa notontosaina nandritra iray volana teo, dia hifarana amin’ny alahady 6 oktobra 2019 ny fifaninanana “Hira gasy Makotrokotroka” fanao eto an-drenivohitra isaky ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe ho an’ny mpianatra. Hifampikatroka amin’izany ny tarika Ratovoson sy ry Ranoelison samy avy any Ampahimanga. Hotanterahina etsy anoloanan’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ity andin-kiragasy goavana ity amin’ny 2 ora tolakandro. Toy ny teo aloha, iray tapitrisa ariary ny loka lehibe hatolotry ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana) sy ny HaiGasy Production ho an’izay mivoaka ho mpandresy amin’ity andiany fahasivy ity.
Goavana ny adin-kira gasy hitranga etsy Analakely amin’ny alahady satria samy andrarezina no hifandona eny an-kianja. Araka ny hita nandritra ny fifanintsanana dia efa samy nametraka ny maha izy azy avy Ratovoson sy Ranoelison ka ho sarotra ny asan’ny mpitsara. “Ankoatra ny tehaka avy amin’ny mpijery dia samy naneho ezaka sy fivoarana ny roa tonta ka nahantafakatra azy ireo hiady ny famaranana”, hoy i Andrianarivelo Faly avy amin’ny Haigasy Production, anisan’ny mpikarakara.
Tsy hitsitsy ry Ratovoson
Raha ny sehatry ny adin-kira gasy no resahana dia anisan’ireo tarika tsy hatoro voanjo hiadiana ry Rafaralahy Raymond avy any Ambatoatrano. Mahatratra roapolo mianadahy mahery eo izy ireo no mandrafitra ny tarika. Misy no tena mbola tanora kanefa tsy vitsy ihany koa ny efa voky taona. Tanjaka hiavahan’izy ireo amin’ny hafa ny fifehezana ny kabary sy ny fahaizana tantara. Misongadina amin’ny fitendrena ny zava-maneno ihany koa ry zareo. Mpandray anjara mavitrika amin’ny fifaninanana sady matetika tafiditra anatin’ireo tarika efatra mifanintsana amin’ny dingan’ny manasa-dalana hatrany ry Ratovoson. Tsy tongatonga ho azy amin’ny dingan’ny famaranana toy izao, araka izany, ry zareo avy any Ambatoantrano fa tao ambadik’izy ireo hatrany ny fiezahana sy ny fikarohana zava-baovao ho an’ny mpankafy.
Vonona hifanandrina ry Ranoelison
Anarana efa tsy vaovao amin’ny sofin’ireo mpitia hira gasy koa ry Ranoelison Ampahimanga. Mihoatra ny roapolo eo koa izy ireo no mpikambana ao anatin’ny tarika. Somary efa zokinjokiny ny ankamaroan’ny mpikambana saingy mbola ao anatin’ny heriny tsara avokoa. Misongadina Ranoelison raha ny rindra an-tsehatra no asian-teny. Milamina kokoa ry zareo rehefa miantsehatra raha mitaha amin’ny tarika hafa. Fototra iray hiavahan’izy ireo ihany koa hafa ny lafiny dihy ahitana rindra mahafinaritra ny maso. Manana ny ambarany sy ny maha izy azy koa anefa ny tarika ao anatin’ny tononkira. Tsy latsa-danja koa anefa izy ireo amin’ny fiangaliana ny lokanga sy ny fidobohana ny langoraona. Na tsy mbola zatra ny “Hira gasy makotrokotroka” aza ry zareo dia hanao izay fara-heriny hahazoana ny amboara amin’izao andiany manaraka izao.
Savorovoro any Ambilobe Lasibatry ny andian’olona ny distrika sy ny polisy
Zahan-tany sy fanantanjahantena :: Raikitra ny tsidi-bohitra an-tongotra sy am-bisikileta eny Ankazomalaza
Hetsika « Mister francophonie » :: Hotsaraina eto Madagasikara ny hatsaran-tarehin’ ireo tovolahy avy amin’ny firenena maro